SAWIRADA TARANKA EEYAHA WEYN EE DANE, 7 - EEYAHA
Sawirada Taranka Eeyaha Weyn ee Dane, 7
Qof weyn oo harlequin Great Dane ah - Waxaa iska leh David Hancock
Fletcher harlequin madaw oo madow iyo caddaan u ah eey sida 2 ey jir tahay
mini pincher chihuahua eeyo isku dhafan
Achilles the harlequin merle Great Dane puppy at 9 bilood jir
Rayna faca weyn ee Dane ee 18 bilood jira, waxaa iska leh sawir Camelot Kennels
Junior brindle Great Dane at 8 bilood jir
Chili the harlequin Great Dane wuxuu caan ku yahay agagaaraha aaggiisa. Qof walba wuu jecel yahay isaga. Wuu ku qurux badan yahay baraf indho buluug ah . Mulkiilihiisa ayaa amarro ku soo amraya isaga wuuna raacayaa iyaga. Waxaa halkaan lagu muujiyay isagoo 7 sano jir ah
Chili the harlequin Great Dane at 7 sano jir
'Merlin waa 14 jir weyn oo buluug ah oo buluug ah. Waxyaabaha uu jecel yahay qaarkood waa baraf baraf, cayrsanaya kubbadaha tennis-ka oo i eryanaya ama la i eryanayaa aniga oo saaran 4-taayir. Wuxuu sidoo kale jecel yahay subagga looska ee Kong-kiisa. Waxaan ku nool nahay ku dhowaad 5 hektar oo wuxuu jecel yahay inuu ag ordo mootada 4-ta lug leh. Dabeecaddiisa ayaa weyn. Waan jeclahay labadayda wiil (8 iyo 9) waxaanan jecelahay inaan la joogo dadka iyo eeyaha kale. Waxaan isku dayeynaa inaan ka dhigno mid bulsheed si uusan u lumin jacaylka uu u qabo dadka. Wuu qayliyaa markii qof u soo dhowaado guriga laakiin wuu istaagaa isla marka uu arko inuu caadi yahay. Waxaan daawadaa Cesar waxaanan isku dayaa inaan raaco tiro ka mid ah qaababkiisa. Qaab kale oo aan u hoggaansamo waa NILIF — Wax Nolosha Ku Nool Ma Xorbaa. Merlin ma haysato wax toy ah / cunno ah ama gardarro goobta ah. Cunnadiisa waan dhigi karaa wuuna fariistaa oo wuxuu sugaa amar sii deyn ah si uu wax u cuno. Waan ka saari karaa cuntadiisa inta uu wax cunayo sidoo kale wax calaamado gardaro ah ma muujiyo haba yaraatee. Waa eey edeb leh. '
Ryan waa 7-bilood jir si qurux badan u calaamadeeyay niman maskaxeed leh oo leh 'ila soco' dabeecadaha waa weyn ee laga sameeyay. Sawir qaali ah Camelot Kennels
Elvis oo ah 2 1/2 sano jir weyn oo deenish ah, kuna dhashay Dec. 1, 1999 Grande Negros, Iswidhan waa culeys qurux badan oo dhab ah 200 lb. (92 kg), height 36 inji (93 cm).
Chloe the harlequin Great Dane oo muujineysa sida ay u weyntahay-inay aragti kaa siiso, milkiilaheeda waa 6'3 'dherer!
'Kani waa Herschelkeyga, shukulaatada Weyn ee weyn ee qiyaastii 8 bilood jirta. Isagu waa eeyga shukulaatada runta ah, sankiisa, suufka cagihiisa, xitaa cidiyihiisa waa midab shukulaato madow. Waxaan ku arkay isaga oo iib u ah wax umuuqday mid daa'in ah, markaa markaan daawanayay liiskiisa in muddo ah ayaan la xiriiray iibiyaha. Waxay umuuqataa inay dhib kuqabaan inay isaga dhigaan guri midabkiisa awgiis. Shukulaatada shukulaatada ah waxay ka dhashaan waalidkood madow oo xambaarsan hidda-wadaha hawlgabka. Xitaa haddii ay sitaan hidda-wadaha recessing-ka, uma badna in faracoodu noqdo ey ey shukulaato ah. Sababtoo ah midabkiisa aan caadiga ahayn, iyo xaqiiqda ah in shukulaatada aysan muujin midabada la aqbalay, waxay umuuqatay inuu sugi karo xoogaa kahor intaan laqaadan. Waxaan u maleeyay inay tahay wax laga xishoodo in qashinkiisa, dhamaan midabbada soo jireenka ah, loo iibsado bidix iyo midig halka eeygan quruxda badan laga tagayo. Markuu iibiyuhu sharraxaad ka bixiyay shakhsiyaddiisa, waxaan go'aansaday in Dane-kayga kale ee Weyn, Floyd, waana inaan la kulanno. ' Hers More of Herschel .
'Kani waa Daneeyga Weyn, Sonkorta. Sonkorta waxay leedahay cillad ku timid hidde-sideheeda taas oo ka dhigeysa iyada caddaan. Waxaa la ii sheegay inay tahay harlequin, taas oo macnaheedu yahay inay leedahay dhibco madow dhammaan jirkeeda. Iyadu waa dhaga la 'natiijada cilladdeeda awgeed . Sonkorta ayaa lala kayimid kan xoolaha kale waxayna tuseen wixii sax iyo qalad ah. Waxay sidoo kale igu kalsoon tahay inaan hago iyada oo aan ilaaliyo. Waxaa loogu magac daray midabkeeda oo aad u macaan. Way igu sii socotaa aniga oo fiiro gaar ah u leh waxa aan qabanayo. Aad bay u ahayd si fiican u dhexgalay . Waxay leedahay afar eeyo kale iyo a bisad la ciyaaro. Saaxiibkeeda ugu fiican ayaa ah Chihuahua waxaan ugu yeernaa Sandy, oo ay u badan tahay inay raadineysay markii sawirkan la qaaday. Iyadu waa hal sano jir culayskeeduna waa 90 rodol. Waxay leedahay guri gaar loo sameeyay oo aan u dhignay iyada. Way jeceshahay inuu socod dheer igu maro oo ku dabaasho harooyinka.
Sonkor sonkorta weyn ee weyn ee biyaha fiirineysa
Macluumaadka Dane ee Weyn
Sawirro Dane Weyn 1
Sawirada Dane Weyn 2
Sawirada Dane Weyn 3
Sawirada Dane Weyn 4
Sawirada Dane Weyn 5
Sawirada Dane Weyn 6
Sawirada Dane Weyn 7
Eeyda Dane Weyn: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
adhijirka jarmalka iyo alaskan malaamute
chihuahua eyga madow iyo bunni
shaqsiyad isku dhafan shaybaarka boston terrier
newfoundland flat isku darka sarkaal dahaarka
3 todobaadkii eey jir ma aha cunid